Sary sokitra ivelany, sary sokitra maoderina - Piedra
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD. dia manam-pahaizana manokana amin'ny fanaovana sary sokitra sy sarivongana, toy ny sary sokitra vy, sarivongana alimo, sary sokitra, sary sokitra fibre, sns. Ireo sary sokitra varahina sy zava-kanto vita amin'ny vy dia azo ampiasaina ho sary sokitra, sarivongana ivelan'ny trano, haingon-trano vita amin'ny rindrina, haingon-trano, sns.
Manana ekipa matihanina izahay: mpamorona / mpanakanto 3D manan-talenta, mpiasa ara-teknika, varotra tsara, ireo inspektera QC matihanina, ekipa mahery varotra taorian'ny famarotana be dia be, izay mandray anjara betsaka amin'ny sangan'asa kanto avo lenta. Ny sary sokitra mamatotra kita dia manampy ny mpanjifanay amerikana hanana ny vidiny faha-2 amin'ny fampisehoana zavakanto malaza any Etazonia, ny mpanjifa amerikanina izao no mpanjifa fiaraha-miasa naharitra ela, nametraka baiko maromaro isan-taona.
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD. dia manam-pahaizana manokana amin'ny fanaovana sary sokitra sy sarivongana, toy ny sary sokitra vy, sarivongana varahina, sary vongana fanampiana, sary vongana fiberglass, sns .. Ireo sary vongana varahina sy sary vita amin'ny vy ireo dia azo ampiasaina ho sary sokitra an-jaridaina, sarivongana lehibe any ivelany, ravaky rindrina vy, firavaka eo an-tokotany, sns. ..
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD ho orinasa mpanao sary sokitra miaraka amin'ireo mpamorona sy orinasa izahay, izay manana traikefa be dia be amin'ny sary sokitra vy, sarivongana varahina, sary sokitra vita amin'ny fiberglass. Manome vokatra tsara foana izahay, fifehezana kalitao tsara, serivisy tsara indrindra amin'ny serivisy amidy amin'ny mpanjifa. Ny fahafaham-ponao no antony manosika anay hamorona sary sokitra tsy mampino sy mahavariana.
Misaotra anao tamin'ny sary vongana lehibe indrindra nataonao ho anay nandritra izay taona izay. Ireo sary sokitra vy matevina ireo dia tena mahavariana ary nahasarika mpizaha tany maro teo amin'ny zaridaina golf.
Zavamaniry fahitana momba ny Abstract ankehitriny
Ny Huge Mirror Sculpture dia natao ho endrika tsy azo ovaina, izay toy ny holatra abstract. Ny habeny dia lehibe ary tokony ho 2m ny haavony izay mety tsara amin'ny fametrahana ao anatiny ho sary sokitra anatiny miravaka. Ny sarivongana vita amin'ny lamba dia azo tehirizina tsara mandritra ny fotoana maharitra ary tsy olana ny mitazona mihoatra ny 50-80 taona. Ka raha tianao ny sary sokitra momba ny asa tanana toa an'io, azafady mba idira aminay avy hatrany. Izahay dia hanolotra anao vidiny mifaninana ho an'ny fanondroan-kevitra. Ny famaritana The Sculpture Name: Abstrac ...
Mahasarika anao ve ity sary sokitra Voninkazo Voninkazo ity? Ny famolavolana dia mitombina sy mahafinaritra ary heveriko fa mahafinaritra ity sary sokitra voninkazo vy ity dia azo apetraka ao anaty zaridaina na tokotany toy ny sary sokitra haingo kanto. Ity sary sokitra vy lehibe ity dia iray amin'ireo sary sokitra tiako indrindra amin'ny sary vongan'ny zavamaniry matotra. Azontsika atao ny manamboatra ny sary sokitra rehetra ho takiana aminao. Manana karazan-vokatra isan-karazany ny tranonkalantsika ahafahanao manamarina izany raha mila jerena. Ny antsipiriny sary momba ny sary sokitra Haingon-trano maoderina an-tsokosoko Dimy namboarina sary sokitra TSIA ...
Sarivongana ivelany ivelan'ny sarivongana lehibe ...
Gaga ve ianao amin'ny sary sokitra stainless steel misy holatra lehibe io? Napetraka ao amin'ny faritra bozaka, Etazonia. Ity sary sokitra holatra ity dia nahazo ny toerana faharoa tamin'ny seho zavakanto malaza USA teo anelanelan'ny sary sokitra 50. Afaka mahita ny tenanao ianao avy any ivelany, satria natao ho fitaratra misy fangarony avo lenta amin'ny alàlan'ny welding sy sary sokitra. Natao ho endrika holatra, mahavariana tokoa izy io rehefa mahita azy eo. Ary ireo mpanjifantsika vahiny dia mankasitraka ity sarivongana lehibe eny ivelany ity. Maninona raha mifidy azy io ho zaridainanao na tokotaninao ...
Azafady mba mifandraisa aminay ary hifandray amin'ny 24 ora izahay.
Sary sokitra ivelany ho an'ny fampirantiana
Ny sary sokitra ivelany dia tena goavambe izay azo tehirizina ho toy ny haingon-trano ivelany, toy ny haingon-trano kianja, haingon-seho an-tsary sy ny sisa. Namboarina tamin'ny endrik'akoho izy io, nohosorana vokarin'ny fitaratra sy loko volamena. Ary hafa io amin'ny volom-bolomanitra iraisana, izay sarivongana io dia miaraka amin'ny volamena volamena miloko, ahafahanao mahita ny fandinihana ny aloka eto. Fa ny loko volamena mahazatra tsy afaka mahita aloka. Raha misy sary sokitra zaridaina metaly tianao, aza misalasala mandefa mailaka aminay amin'ny sales1 @ b ...
Inona no sary sokitra amin'ny zavakanto metaly
Ny sary sokitra metaly metaly dia manana anjara asa tsy azo ovaina amin'ny famolavolana sehatra sy haingoana. Ny sary sokitra metaly Ornament dia azo apetraka amin'ny toerana anatiny na toerana anatiny, ary koa azo ampiasaina amin'ny sehatra nentim-paharazana. Fantatray ny sary sokitra metaly ahitana karazan-javatra sasany toy ny sary sokitra stainless varahina, varahina s ...
Maninona no ampiasaina amin'ny sary sokitra ny varahina
Ny sary sokitra varahina dia manana fotoana lava be izay azo tazonina sy voatokana tsara kokoa mandritra ny taona an-jatony. Raha oharina amin'ny sary sokitra hafa, ny sary sokitra varahina koa dia manana tantara lava, tsy izy ve? Fantatsika fa ny fanaovana sary sokitra varahina dia azo atao endrika, endrika biby sns, noho ny minitra ary ny antsipiriany manokana dia mitaky ...
Mora azo ve ny vy korten?
Corten vy na Weathering vy dia karazana manokana andiana vy firaka ambany eo anelanelan'ny vy tsy misy fangarony sy ny vy karbonina tsotra. Izy io dia manana fanoherana ny vatohika sy ny coating amin'ny alàlan'ny vy vy, ary ny vidiny dia lafo kokoa noho ny stainless vy. Ny takelaka vy corten dia ...